केही समयअघि कन्चन र अनिसाको यस्तो थियो माया प्रेम; जुन भिडियो अहिले टि’क’ट’क’भरी भा’इ’र’ल छ (हे’र्नु’स भि’डि’यो) – Onlines Time
February 18, 2021 February 18, 2021 onlinestimeLeaveaComment on केही समयअघि कन्चन र अनिसाको यस्तो थियो माया प्रेम; जुन भिडियो अहिले टि’क’ट’क’भरी भा’इ’र’ल छ (हे’र्नु’स भि’डि’यो)
विवाह गरेर पुन: घर फर्किएकी अनिशा यस विषयमा स्पष्ट पार्न मिडियामा समेत आएकी थिइन । अनिशाका अनुसार उनीहरुको चिनजान फेसबुक मार्फत भएको थियो । त्यसपछि विस्तारै उनीहरुको फेसबुक मै मायाको कुरा भएको स्वि,कारिन अनिशाले । तर फेरि अनिशाले आफुले दिएको बयान फेर्दै अनिशाले विवाह नै गर्ने भनेर स्वीकार न,गरेको बताएकी थिइन । कन्चनले काठमाडौँ लगेर आफुलाइ ज,व,र्ज,स्ती सिन्दुर लगाईदिएको समेत उनले बताएकि थिइन ।
तर यता कन्चनका परिवारको भने अर्कै दावी रहेको थियो। कन्चनका आमाका अनुसार अनिशाले धो,का दिएपछि आफ्नो छोराले आ’,त्मह’,त्या गर्ने कोशिस गरेको हो । अहिले कन्चनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
आज उक्त घ,ट,नाको ४६ दिन बितिसक्यो तर पनि कन्चन को अवस्था अझै ना,जु,क छ । अन्ततः कन्चन नि,भ्नै लागेको अवस्था छ । तीन पटक सम्म त उनी भेन्डिलेटरमै बसिसकेका छन । अब यतिसम्म कि उनीको अहिले त औसधि समेत रोकिएको छ । बस अब भगवान भरोसा । प्रस्तुत छ कन्चन र अनिशाको केही समय अगाडीको टि,क,ट,क भिडियो
दुखद खबर: अरूको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दागर्दै आफैं रहिनन नर्स अनिशा !
साउदीमा लागु भएको नयाँ कानुनले कस्ता कामदारलाई छुन्छ? कस्तालाई छुदैन ?